लण्डन शहर र नेपाली युवती | मझेरी डट कम
kbs — Mon, 02/14/2011 - 18:19
मौसम पूर्णिमाको रात जस्तो छङ्ग स्पष्ट खुलेको छ, खुल्ला नीलो आकाशमुनिको लन्डन शहर चम्किलो देखिन्छ एक यौवन सुन्दरीझैँ आफैमा निकै सुन्दर आकर्षणमय । चेरिङक्रस रेल्वे स्टेसनमा उत्रेर लामो आङ् तन्काउँछु म जसरी पोखरीमा डुबेर निस्केको गैंडाले तान्छ । मेरो यात्रा थेम्स नदीमाथि बनेको गोल्डेन जुब्ली ब्रिज हुँदै अगाडि बढ्छन्, आहा ! कति निर्मल, सुन्दर, कन्चन थेम्स नदी, ब्रिजबाट नियाल्छु म नदीलाई धित नमरून्जेलसम्म ।
गोल्डेन जुब्ली ब्रिज पार गरेर म जुब्ली गार्डेनमा पुग्छु । मात लगाउँछ त्यहाँको मनमोहक दृश्यले उसैउसै । झस्स मलाई काठमाडांै, रत्नपार्कको याद आउँछ तर कहाँको बदाम र सुन्तलाको बोक्राले बिफर आएको मान्छेको गाला जस्तो फोहोरो रत्नपार्क, कहाँ आफ्नै पैतालाको मैलो सर्लाझैँ चम्किलो सफा सुकसुकाउँदो जुब्ली गार्डेन ।
ब्रिटिस एअरवेंज लन्डनआइबाट सिङ्गो लन्डन शहरको दृश्यहरू अवलोकन गर्नु मेरो उदेश्य थियो, म टिकट किन्नलाई लाइनमा बस्छु । ब्रिटिस एअरवेंज लन्डनआई लन्डन शहरकै एक प्रमुख पर्यटकीय स्थल हो भन्दा अतियुक्ति नहुने प्रमाण त्यहाँको भिडभाडले गराउँछ मलाई । आफ्नो इच्छालाई परिपूर्ण पार्नको लागि जति सुकै अप्ठेरो, लामो प्रतीक्षा पनि गर्न सक्छ मान्छे भन्ने कुराको म आफै ज्वलन्त उदाहरण बनेँ ।
टिकट लिएँ, मन उसै चञ्चल भइरह्यो, जुन ठाउँको बारेमा म पत्रपत्रिकामा पढ्दा नै रोमाञ्चित हुन्थेँ भने आज उसैको काखमा बसेर खेलिरहेछु निर्धक्क । सुमसुम्याउँदै छु उसको अङ्गप्रत्यङ्ग, मन फुलेको छ इन्द्रकमल फुलेझैँ ढकमक्क, जब अवलोकन कक्षमा प्रवेश गर्ने पालो आयो म भित्र पसेर सिटमा बस्छु थचक्क । कता कता रोटेपिङ जस्तैजस्तै पनि लाग्यो मलाई ब्रिटिस एअरवेंज लन्डन आई तर मात्र त्यो मेरो एउटा हाँस्यासपद अनुमान हुन्छ किनकि कहाँको मामुली रोटेपिङ् र कहाँको लन्डनआई ।
एउटा केवलकारमा आठ जनाको सिट भए जस्तै एउटा अवलोकन कक्षमा पच्चीस जना बस्न मिल्ने रै‘छ । म बसेकै अवलोकन कक्षमा एउटा नेपाली चेहेरा झुल्कियो झल्याक झुलुक, मलाई उनको त्यो सुन्दर चेहेरा कहीँ कतै देखे जस्तो, कतै भेटे जस्तो परिचित लाग्यो । उनलाई पनि त्यस्तै लागेछ क्यारे र त चोरी चोरी नियाल्छन् एकजोडी आँखा ।
थेम्स नदीको किनारैमा निर्माण गरिएको लन्डन आइबाट थेम्स नदी झन सुन्दर देखिन्छ, अत्यन्त मनमोहक । अग्लो ब्रिटिस टेलिकम टावर पनि सुन्दर देखिन्छ लन्डन आइबाट । लन्डन शहरका मुख्य अग्ला भवन सेन्टर प्वाइन्ट, वाटरलु ब्रिज सबै आँखाका नानीमा रोटेपिङ खेल्न आइपुग्छन् ।
मैले काठमाडौंको धरहरा सम्झिएँ त्यो पल तर लन्डन आइबाट लन्डन शहर नियाल्न जति सहज छ धरहराबाट काठमाडौं नियाल्न त्यति सहज छैन । हुन त धुलो धुवाँको राजधानी काठमाडौ शहरलाई लन्डनसँग दाँज्न पटक्कै सुहाउन्न । काठमाडांैको घण्टाघर झैँ लन्डन शहरको बिगबेन नामक घण्टाघर पनि नजिकै हेर्न पाइयो लन्डन आइबाट । लन्डन आइको अवलोकन कक्षबाट फनक्क एक फन्को मार्दा सिङ्गो लन्डनको दृश्य एकैपटक झुम्मिन आयो आँखाभित्र परेलीमा टेकेर, थेम्स उपत्यकालाई नजिकबाट छामेको महसुस भयो मलाई ।
हामी पालैपालो अवलोकन कक्षबाट उत्रियौँ, त्यो अर्ध परिचित एकजोडी आँखाहरू पच्छ्याउँदै छ अझै पनि मलाई, उनी सामु नपुगी छुट्टिन पटक्कै मानेन मन, एक प्रकारको चुम्बकीय शक्तिले तान्यो मलाई उनीतिरै ।
उनी जुब्ली गार्डेनमा गएर बसिन्, मलाई यस्तो लाग्यो उनी मलाई पर्खिदैछिन् । उनका अमूक हेराइले डाकिरहेछ मलाई, ठूला ठूला नजर पर्लक्क मतिर पल्टाउँदै एउटा मीठो आनन्दको अनुभूति तरङ्गगित बन्छ नसा–नसामा । हेराइकै वाण लागेर घाइते म मुसुक्क हाँस्दा जहर पिएझैँ मद्होश नै बन्न पुग्छु ।
अप्ठेरो मलाई मात्र कहाँ लागको हो र ? त्यो पीडाबाट अछुत थिइनन् उनी पनि भन्ने प्रमाण उनको हातमा रहेको नेपाली सन्देश साप्ताहिकलाई ओल्टाई पल्टाई बनाउनुले बताइरहेछ । कहिले सिरानमा त कहिले पुछारमा पत्रिकालाई खूव चलाउँछन् उनका हातहरू भने नजर थेम्स नदीमा, कहिले लन्डन आइ त कहिले हुत्तिन्छ मसम्म ।
“तपाईंले मलाई चिन्नु भयो तर मैले त चिनिन नि, नेपालको कुन ठाउँमा हो तपाईंको घर ?”
नजरको तीर मुटु नै छेडौंला जस्तो गरी वर्सियो अङ्ग–अङ्गमा, अदृश्य पीडाले कोपरिरह्यो मुटु, उज्यालो मुहार, रातो घुम्रिएको कपाल, थेम्स नदीबाट बहेको हावाले उडाउँथ्यो फुर्र फुर्र उनको निधारमा । हावाको चुम्बन पनि घातक होलाझैँ कोमल छ उनको मुहार ।
पहेँलो कलरको टिसर्ट र ब्राउन पाइन्टमा चन्द्रमा झैँ खुलेको छ सौन्दर्य, सुन्दर बगैंचामा फुलेको मखमली फूल जस्तै सुन्दर अति सुन्दर । म हेरिरहन चाहन्छु त्यो सुन्दरता एकनास आँखा नझिम्काई । हुन त सुन्दरता कसलाई मन नपर्ला र ? पुतली पनि त फूलको सुन्दरतामा लोभिन्छ लठ्ठ परेर भने म उनको सुन्दरतामा त्यसै भावुक बन्छु ।
“त्यस्तै एक हप्ता भयो, अफिसियल कामले आएको हुँ एक महिनाको लागि । आएको बेला लन्डन आइ किन नहेराँै भनेर यता पसेको, अनि तपाईंलाई हेर्दा त यतै बस्नु हुन्छ जस्तो छ हैन र ?” डराई डराई प्रश्नको एक झड्का हुत्याएँ मैले पनि उनी छेउ ।
“कमलजी ! तपाईंले मलाई अझै चिन्नु भएन, त्यत्रो दश दश वर्ष कुकुर बिरालो जस्तो झगडा गरेर बिताएको कसरी भुल्नु भो हँ, बिर्सनुभयो एक्ले पीपलमा बाटो छेकेको, कि भुल्नुभयो क्लासमा मलाई सधैँ पछाडि बेन्चमा मात्र खटाएको कुरा, सिन्धुरे खोलामा ब्याग बगाइदिएर सबै किताब भिजाएको झ–झल्को त होला नि हैन ?”
“मूर्ख त्यत्रो क्लिउ बताउनु पर्ने तपाईंलाई त मैले परैबाट चिनेको थिएँ त्यो छुच्चो अनुहार, घमन्डी चेहेरा अनि मलाई सताएको कहाँ भुल्न सक्छु र ?” उनी अलिकति भाबुक बनिन् ।
“सरि ! शिल्पा, तिमी पहिलाकी जस्ती छैनौ, कहाँको त्यो काली, छोटो कपाल बनाएकी रिसाहा, पिलन्धरे शिल्पा । कहाँ चन्द्रमा झैँ धपक्क बलेकी तिमी, आकाश जमिनको फरक छ त्यो शिल्पा र तिमीमा, नारीको जीवनमा त निकै ठूलो उथलपुथल पो आउँदो रै‘छ । त्यो कुरा भनेको मात्र सुनेको थिएँ तर आज तिमीमा आएको परिवर्तन देखेर पत्याउन बाध्य बनाएको छ ।
प्यारो कति प्यारो आँखा तरे पनि ।
“कमलजी ! कुन संसारमा हराउनु भएको ? कतै अतीतको कुटुरो फुकाउन त थाल्नु भएन, साँच्चै कति रमाइलो थियो त्यो समय, तपाईं खालि मेरो रिस गर्ने, गाली गर्ने मलाई त्यो दिनको विशेष सम्झना आउँछ । भुवन सरले सामाजिक शिक्षाको नम्बर सुनाउनुभयो । मेरो नम्बर तपाईंको भन्दा पाँच नम्बरले बढी आयो । बाफरे त्यो पल हाँडी घोप्टाएको जस्तो अनुहार लगाउँदै भुवन सरलाई मुख छाडेको कहिल्यै बिर्सन्न, बिचरा भुवन सर, कापी नै तपाईंको अगाडि ल्याएर पछार्नुभाथ्यो । यस्ता घटना त कति कति सञ्चय भएर बसेका छन् मेरा मानसपटलमा तपार्ईंंको यादसँग । शारीरिक शिक्षामा खेल खेल्न जाँदा मैले खेले तपाईं खेल्नु हुन्न थियो । यस अर्थमा कुनै पनि खेल नखेली पढेकै आधारमा परीक्षा दिएकी थिएँ मैले । यस्तो लाग्छ तपाईंसँग जोडिएका हरेक घटना र तपाईं जीवनकै एक प्रमुख अङ्ग बन्नु भएको छ मेरो लागि आज ।
मादक हाँसो फैलिन्छ चारैतिर, उनी हाँस्दा यस्तो लाग्छ सुनाखरी फक्रिएको, लन्डन शहरको त्यो सुन्दरता सिल्पाको अगाडि फिक्का छ एकदम फिक्का । हेर्दा हेर्दै उनका लालित्य सुन्दरता पैचो मागौँ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई ।
“कमलजी ! म लन्डन आएको त्यस्तै पाँच वर्षजस्तो भयो, म लन्डनको एक्टन स्थित क्विन्सल्यान्ड कलेजको लाइब्रेरीमा काम गर्छु । तपाईंलाई थाहा छ ?”
आँखा ठूलो बनाउँदै र परेली नचाउँदै आश्चर्य जनक भावमा भन्छिन् उनी– “त्यस कलेजमा नेपाली पन्ध्रजना विद्यार्र्थीहरू छन् । उनीहरूसँग भेट्दा मलाई आफू नेपालमै भएको प्रतीत हुन्छ । के गर्ने कमलजी तपाईंले जस्तो जिल्ला टप एस.एल.सी.मा गर्न सकिएन । अंग्रेजीमा बत्तीस ल्याएर बल्ल बल्ल पास गरेको मार्कसिटले राम्रो विषय लिएर पढन पनि पाइएन । पद्म कन्यामा पढदै गर्दा, बाइचान्स लन्डन आउन पाइयो, अनि बताउनुस् तपाईंको घर परिवार, पढाइ कहाँ पुग्यो ?”
लामो चुरोटको सर्कोसँग आफ्नो विगत अलिकति खोतलिन् उनले, कतै मलाई खोतलखातल पार्दै त कतै आफैंलाई चिरफार गरेर, उनको भनाइसँग लडिबुडी गर्दै विगतमा पुग्छु म पनि एकपल्ट । धमिलो छायाँ कुहिरो मडारिएझैँ मडारिएर आउँछ मानसपटलमा । सोचाइ त त्यसैमा डुबुल्की मार्न खोज्दै थियो तर त्यति रमणीय पल तीतो विगत केलाएर खेर पाल्न चाहिन मैले ।
“त्यही त शिल्पा ! एस.एल.सी.मा जिल्ला टप हुनु नै त दुर्भाग्य हो मेरो लागि, स्तरीय पढाइ, लक्का जवान, खानदानी घर परिवार हुनुको पीडा छुट्टै छ म भित्र, तिमीले जस्तो गोल्डेन चान्स भाग्यले कहिल्यै जुराइदिएन मेरो लागि । एउटा सरकारी बैंकमा जागिर, पारिवारिक रणभूमि, दिक्क लाग्यो जीवन । तिमीलाई यो शहरमा खुल्ला जीवन बिताएको देख्दा ईष्र्या पो लाग्यो गाँठे मलाई ।
अप्रत्याशित सोधाइको झड्का लगाइन् दिमागमा, उनको यो सोधाइले म पुनः फेरि विगतमा गएर पछारिएँ नराम्रोसँग । बेजोडले पछारिदा पूरै शरीर थिलथिलो भएर दुखेको अनुभव भयो मलाई ।
तिमीलाई के थाहा सिल्पा कुन जिन्दगी गुजार्दै छु म । विवाहित भनाँै भने कुमार नै छु अविवाहित भनौँ त अग्निको सात फेरो लिएर नारी आकृतिलाई सिन्दुरलाइ सकेँ सबैको सामुन्ने । मलाई भोगाइले चिमोट्छ असैहे हुने गरी । म उनीसँग सहकार्यमा जिउँदै आएको छु मात्र मनको । मन अति नाजुक हुँदो रहेछ, नेपालमा छँदा आफ्नो मनलाई बशमा राखेको थिएँ तर जब लन्डनमा सिल्पालाई भेटे तब नाजुक मनले बनायो एउटा कल्पनाको धरोहर । त्यसैमा रम्न खोज्दा थाहै नपाई धकेलिएँ पुन यथार्थको गहिरो धरातलमा । वर्सन लागेको मेघले ढाकेको आकाश जस्तो हुन्छ मुहार, म आफैलाई थाहा छ कपडामा दल्न ठीक्क पारेको आइरनझैँ तातो भएको छ गाला । आफ्नो मुहार र शरीरको तापक्रमलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउने जमर्को असफल हुन्छ मेरो ।
“किन र कमलजी ! विवाहको प्रसङ्ग उठाउने बित्तीकै कालो निलो बन्नु भो, सरि तपाईंमा चोट पुर्याउने उदेश्य थिएन मेरो, अनि तपाईंलाई कस्तो लाग्यो लन्डन ?”
कृत्रिम चमक ल्याउन प्रयास गर्दै बोलेँ म, “ब्युटिफुल, लन्डन शहर अति सुन्दर तर तिमी जति चै हैन है ।”
“ल यो मान्छेले जीवनमा पहिलोपल्ट मेरो प्रस्ताव स्विकार्यो थ्याङ्स् गड ।” उनी आकाश तर्फ फर्केर ढोग्छिन् आफ्नै आत्मालाई साथमा ब्यङ्ग्यको हाँसो हाँस्छिन् जुब्ली गार्डेन थर्कने गरी म पनि लोलि मिलाउँछु उनीसँगै ।
आरामदायी यर कन्डिसन ट्याक्सी, चिल्लो अति राम्रो बाटो, बाटोको दायाँबायाँ किनारको सुन्दर हरियाली चिटिक्क हिस्सी परेको चौर, प्रवेशद्वारदेखि नै दायाँबायाँ आकर्षण गमलाको ताँती, त्यसो त लन्डन शहरका प्रत्येक गल्ली निकै राम्रा, सुन्दर छन् नेपालको तुलनामा, त्यत्रो जनसंख्या, त्यति बाक्लो बस्ती तै पनि फोहोरको क्लेस भेटिन्न, साँच्चै मान्नुपर्छ बा लन्डनबासीलाई ।
अघिअघि लागेर एउटा भब्यमहलको सुन्दर कोठामा पुर्याउँछिन् उनले मलाई । कोठा यति आर्कषण छ कि म एकएक गरेर नजरले सुमसुम्याउनै ब्यस्त हुन्छु ।
यति भनेर शिल्पा सानो पर्दा पछाडि हराउँछिन् । निकै नै मेहनत गरेर सजाएको त्यो कोठामा म सर्लक्क भिज्न, एकडेढ घण्टा नै लाग्ला जस्तो लाग्छ सबै सामग्री एकसे एक चमकवाला, नयाँ प्रकारका अति नै लोभ्याउँछ तिनीहरूले मलाई ।
“कुन कुन ठाउँ घुम्नुभयो त लन्डन शहरको ?”
मेरो सवालमा उनी हाँसिन् मात्र केही बोलिनन् मलाई अलिक नरमाइलो लाग्यो ।
त्यसै बीच मेरो आँखा भित्तामा रहेको तस्बिरमा गएर ठोक्किन्छ, नियालेर हेर्छु, एउटा युवकको दाहिने अँगालोमा तीन चार वर्षको बच्चा बोकेर शिल्पा मुस्कुराएकी छिन् । को हो त्यो युवक ? मलाई थाहा छ सिल्पाको आफन्ती भने पक्कै हैन फेरि त्यो बच्चा, बरफझैँ चीसो बन्छ मुटु तापक्रम शुन्य डिग्रीमा झरेर ।
एकछिन अगाडि सम्म रमाइलो लागेको कोठा छिनभरमै निसासिदो लाग्यो एउटा अनकन्टारको गुफाझैँ, ती सजावटका सामानहरू सबै बुख्याँचा जुन मलाई तर्साउन बनाइएको, किनकिन एकाएक छटपटी बढ्यो मभित्र, कहिले चिसिने र कहिले तातिने होडमा मुटु उछिट्टिए जस्तो लाग्छ कफीकै प्लेटमा ।
उनी एकोहोरो हेरिरहन्छिन् मलाई । उनको हेराइमा देख्छु मेरो मुटु स्वाद मानी चपाएझैँ । म अतालिन्छु, लन्डन शहर मैमाथि कोल्टे परेर पल्टिए जस्तो कसो कसो भाग्न मन लाग्छ त्यहाँबाट । कफी पिलाएको धन्यवादसम्म नभनी बाहिरिन्छु म ।
सूर्यको उज्यालोले गति छाडेर बत्तीहरू राज गर्नमा मैमत्ते छन् लन्डन शहरमा ।
उज्यालोको विम्बहरूमा म अँध्यारो फ्याँक्दै छु, सिल्पासँगको अप्रत्याशित भेटले निकै चिमोट्यो मलाई साह्रै नराम्रसँग दुख्नेगरी । विद्यार्थी जीवनमा नबढेको चाह, रहर अनि उमङ्ग एकाएक भलबाढी भएर हेलियो मनको फाँटमा । भलबाढी आउनु के थियो र ? मनमा घाउ लाग्नु पो रै‘छ । कति नाजुक छ मन सानै कुरामा पनि चुक्किने, टुक्रिने र झर्याम् झुरूम फुट्ने ।
लन्डन शहरको आकर्षण बिषझैँ तीतो लाग्छ मलाई, दायाँबायाँ नजर डुलाउन पटक्कै इच्छा छैन मन नलाई नलाई एउटा ट्याक्सी समातेर लाग्छु एनिवर्गको सिटी सेन्टर स्थित आफू बसेको होटलमा ।
अतिथि (not verified) — Wed, 02/16/2011 - 06:43
साच्चई मर्म स्पर्ष रहेछ यो घटना.. अतीतले मानिसलाइ सधै पिरोली रहन्छ.. भुल्न पनि कहा सकिन्छ र ?? तर अतीतलाई एउटा सामान्य घटना सम्झेर बिर्सने कोसिस गर्नुनै बेस होला ....
kbs — Fri, 03/04/2011 - 21:51
माथि अतिथिज्य़ूले भन्नुभा' झैं मर्मस्पर्षी कथा प्रस्तुत गर्नुभो सुबिसुधाजीले । सामाजिक कथा लेखनमा वहाँको कलमको सशक्तताको अर्को प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ यो कथालाई ।
नेपालका नेता (डोटेली गीत)
यो मनमा तिमी
नक्कलीलाई भगाइलग्यो झिल्केले
खोई त तिमी आईनौ ।
आज फेरी मन
साँझको बत्ती बलेजस्तै अनुहारमा आयौ
विदेशको ठाँउ कसरी रमाउँ